Assistants Teacher Job Inkcazelo / Uxanduva Template And Iindima – JobDescriptionSample.org
ekhaya / Akohlulwanga / Assistants Teacher Job Inkcazelo / Uxanduva Template And Iindima
Assistants Teacher Job Inkcazelo / Uxanduva Template And Iindima
superadmin Isilimela 28, 2016 Akohlulwanga 2 izimvo 1,108 Views
Sifeze imisebenzi leyo kunokuba tutorial ngokulwa okanye kubonelela ababoneleli ngoko nangoko abazali okanye abantu. Ncedisa ukulungele apho nto efundise ityala lokugqibela kuyilo koMthetho neenkonzo kunye nezicwangciso imfundiso.
Nika abafundi kunye iimbandezelo ngokweemvakalelo real, kuquka non-British abathetha abafundi okanye abo usebenzisa specialneeds ne ngoncedo ongeze.
Trainer nokukhokela ulutsha ukuba ukuqinisekisa amagama ukufunda eyenziwa ngootitshala kunye singularly okanye kwiindawo zoluntu ezincinane ukubanceda inkosi izabelo.
Gada abafundi kumagumbi okufundela zokutyela kunye zemidlalo, okanye kwi-entsimini, ekuphumeni.
Ukuphumeza izikhokelo zolawulo kunye nemithetho ekhokhelayo abafundi.
abantu isaziso’ ukusebenza, kwaye ukubhala ingcaciso eya kusetyenziswa ukuhlola inkqubela.
Type, document, and replicate resources.
Spread training components such as for example books, workbooks, forms, and pens to individuals.
Attend staff conferences and function on committees, njengoko kuyimfuneko.
Make exhibits, bulletin-board displays, lesson materials, izixhobo, and demos.
Wacwangcise la magama ze esweni nezinye zolonwabo yangaphandle kwakunye imidlalo ukuba sibhengeze ingqondo, real, kunye nenkqubela phakathi.
izixhobo zokuqeqesha Laminate ukwandisa sturdiness labo phantsi ukuphindaphinda.
Gcobisa iimviwo kunye nemisebenzi ekhaya ukuba zenziwa kwaye ndibabuthe.
Phumeza-out seshoni zonyango ezifana umzekelo utshintsho yokuziphatha kunye izicelo phambili ngabanye, phantsi abafundisi zemfundo ezizodwa, kwengqondo, okanye wokongamela Intetho – pathologists ulwimi.
abafundi Supply ikhubaziwe kunye nezixhobo zokuncedisana, technology inkxaso, nezikhokelo zonikezelo namaziko umzekelo zangasese.
Emigudwini nomqeqeshi ukothula nokupaka.
Cinga yeklasi yokuhamba nokugcina iifayile zomsebenzi.
Level ukulungiselela iimvavanyo, , abale ne ifayile iziphumo, sisebenzisa iingubo isisombululo okanye iiyunithi ngokuqaphela zombane.
Yenza nentwana intlanganiso kunye nobuchule banikwa iinkalo zezifundo apapashe ichaza ukuba izifundiswa ukuze begxeka.
Londoloza desktops e iilebhu eziklasini kwaye nokunceda abafundi usebenzisa ukusetyenziswa hardware kunye nesicelo.
Thatha inxaxheba kwiinkomfa bokuhlohla-umgcini malunga inkqubela individualsI okanye iingxaki.
Strategy, ukwenza, nokuphuhlisa ezahlukeneyo zoqeqesho lixhasa ezifana for zolwazi umzekelo, chart, kunye neemephu.
Okungu ukuba enze ukufundisa izakhono ezifana grooving, ezemidlalo, ngezandla.
ukufundisa zerikhwizishini inikeza kunye nezinto.
Qokelela lwedola abafundi malunga college- imisebenzi enxulumene.
satellites zonxibelelwano zathunyelwa nge eklasini ngetsheki Makugcinwe khona okanye basindiswe iinkqubo.
Baleka uqhubeke nokulondoloza imveliso neziviwa-zibonwa leyo.
Guide oonolayibrari kwiilayibrari zezikolo.
Task okungu Kuyimfuneko
Isicatshulwa-Knowledge amabinzana okulungiswe imigca emaphepheni ezinxulumene nomsebenzi.
ulwazi Ukuphulaphula-Ukunikezela Active yonke into bathi abanye abantu, ukufumana ixesha ukuba uqaphele ukuba wenza iinkcukacha, imibuzo ezibuza ngendlela efanelekileyo, yaye emlonyeni iimeko ezingachanekanga.
Ukudala-Ephepheni njengoko ezazibonisa ukuba nezidingo zemakethi uncokola ngempumelelo.
Ukuxoxa-Talking-kwabanye ukuba ukwabelana data kakuhle.
Yokalo emileyo-Ukusebenzisa izibalo ukulungisa iingxaki.
Uphando-Isebenzisa ubuchule kunye nezikhokelo ezilawulwa ukusombulula imiba.
Critical-UkuCinga-nokusetyenziswa sizathu nokuqiqa ukuzibona iitalente kunye nengeloncedo izigqibo, iindlela ezizezinye okanye iindlela ekhokelela engxakini.
Active Learning-ukusiqonda nokunaba of iinkcukacha entsha ngokuphathelele ikamva ngamnye nokusombulula iingxaki ezikhoyo nokwenza izigqibo.
Techniques-Ukukhetha ukufunda nokusebenzisa zokufundisa / iindlela tutorial kunye nobuchule elifanelekileyo xiyimo xa sele uyincutshe ekudlaleni okanye izinto zokufundisa ezintsha.
Tracking-Monitoring / Ukumisa ukusebenza ngokwakho, abantu abahlukeneyo, okanye iinkampani ukudala uphuculo okanye cinga amanyathelo okulungisa.
Social Perceptiveness-Ukwazi kwabanye’ ukusabela ukuqonda isizathu sokuba bona basabela njengoko benza.
Dexterity-Ukulungisa izenzo ngokunxulumene amanyathelo othersI.
Ukweyisela-Ndeyisela abanye ukutshintsha ukuziphatha okanye iingcinga zabo.
Uthetha-thethwano-Ukuzisa abanye ngokuhlangeneyo kwaye uzama axolelanise mahluko.
Uqeqesho-Uqeqesho abanye HOWTO ukwenza intshukumo.
Orientation-Ngokugqibeleleyo Service ekufuneni iindlela ukuxhasa abantu.
izibakala Problemsolving-umahluko ukuntsonkotha iingxaki kunye nokuphengulula Complex enxulumene isicelo iimpendulo uze uhlolisise nokwakha phezulu ukhetho.
Imisebenzi Evaluation-Ukuhlolisisa iimfuno isisombululo kwaye ufuna ukuba bavelise uyilo.
Technology Design-Ukwenza okanye nokuseka iimveliso kunye nobuchwepheshe ukukhonza iimfuno umntu.
Izixhobo Selection Ukwazi uhlobo kwezixhobo kunye nezixhobo ezifunekayo ukwenza umsebenzi.
Ifakela-Ukongeza iingcingo, models, izixhobo, okanye iinkqubo ukuhlangabezana iimpawu ngokubanzi.
iiphakheji computer Programming-Ukudala malunga iinjongo ezininzi.
Operations Monitoring-Observing knobs, Iimbonakalo, or different symptoms to be sure an equipment is currently working properly.
Quality Control Examination-Doing testing and inspections of products, izisombululo, okanye amacebo ukuze alinganise umgangatho okanye ukusebenza.
Systems Analysis-Deciding what sort of process should work and the way improvements in functions, izimo, kananjalo emoyeni zingaba kuchaphazela iinzuzo.
izenzo Systems Analysis-zokwahlula okanye ezibonisa ukusebenza kunye ngokungqinelana iinjongo umatshini olufanelekileyo okanye amanyathelo afunekayo kakhulu ukwandisa intsebenzo.
Time Management-Ukulawula mzuzu abanye kwakunye ngomzuzu omnye zabucala.
Ulawulo Imali-isigqibo ngendlela iidola Ngokuqinisekileyo kuya kusetyenziswa ukuba umsebenzi ugqityiwe, sezimali ukuba ezi ntlawulo.
Imisebenzi ye iziyobisi Iindlela-Ukufumana kwaye wafumanisa ukuba ukusetyenziswa echanileyo kwamaziko nezixhobo, kunye namacandelo namacandelo kwafuneka imfuneko ukwenza umsebenzi ethile.
Kweliso Abasebenzi Resources-Ukuzuza, eliqhubela, kunye noyena abantu xa asebenza, ukubona abantu best for loo msebenzi.
Ezinye iiNkqubo College
Imfuneko Task Leadership Skills
Ukuphikelela – 94.02%
Cooperation – 92.84%
Ingxaki Abanye – 95.78%
Ulungelelaniso Cultural – 92.58%
Ukuzibamba – 94.54%
pressure Tolerance – 94.04%
ukuthembeka – 95.08%
Jolisa Ubunzulu – 94.74%
ukunyaniseka – 95.19%
inkululeko – 91.61%
Development – 93.11%
Thinking kohlaziyo – 90.73%
Pingback: Imidlalo My
Pingback: Ngaba Ungathanda A uYobhi Apho Komsebenzi Ukudala Ezinye To Go To Sleep? – Macbuyz